10 nke kasị mma njem ngwa ọdịnala - News Ọchịchị
10 nke kasị mma njem ngwa ọdịnala
Ọ dịghị mkpa a smartphone jupụtara gimmicky ngwa ọdịnala. Anyị na-na nkata wee jide a nhọrọ nke kacha mma ngwaọrụ maka dijitalụ-savvy njem
Isiokwu a na-akpọ “10 nke kasị mma njem ngwa ọdịnala ... na ị ga-eji mee” e dere site Will Coldwell, n'ihi na theguardian.com on Saturday 2nd January 2016 07.00 UTC
Ogologo oge, mgbe ọ bụla m hụrụ na iji Google Maps ịnyagharịa London ihu ọha iga netwọk enyi ga-ele anya n'elu na papa: "Oh, adịghị ị na-eji Citymapper?"N'ikpeazụ, ekwenyere m.
Comprehensive, mfe iji na na-playful, Citymapper awade ọzọ zuru ezu njem planner ọmụma karịa Google, gụnyere n'ezie na-ọpụpụ na emeghasịkwa alerts, nakwa dị ka über mwekota na okirikiri ụzọ gasị. Na ọ bụ dị gburugburu 30 ukwu n'ụwa nile, na ihe niile ndị doro anya obodo-ezumike ebe kpuchie. Ọ ọbụna na-agwa gị otú gị ogologo njem ga-ewe site jetpack - abaghị uru ọmụma n'ezie, ma Olileanya ihe ị ṅụrịa mgbe gị ụgbọ okporo ígwè na-kagbuo.
• Free, iOS na Android, citymapper.com
N'ime 70 nde mmadụ ịdenyere aha na Duolingo, a free na incredibly ọma-e asụsụ mmụta ngwa. Ezie na ọ bụghị a dochie kwesịrị ekwesị asụsụ nkuzi, ngwa bụ a fun ụzọ na-ihe ndị bụ isi, ma ọ bụ na-na-onwe gị ọhụrụ on ụtọ asụsụ na ìgwè okwu, tupu a njem ná mba ọzọ. Dị nnọọ ka a na kọmputa egwuregwu, ngwa ga-eduzi gị na ọkwa na ị chọrọ iji wuchaa tupu ịka, na ị na-amụta ihe n'ụzọ.
• Free, iOS na Android, duolingo.com
XE bụ aga na-na saịtị maka ego tọghatara na weebụ, ya mere, nke ọ na anya na ya na-eji ngwa bụ na-ewu ewu: na n'elu 20 nde downloads ebe ọ bụ na igba egbe. Ọ nwere nza nke azụmahịa na-abara atụmatụ, dị ka ọnụego maka oké ọnụ ahịa ọla na akụkọ ihe mere eme akwụkwọ ego chaatị dị iche iche, ma onye ije Ọ bụ ihe kasị bara uru n'ihi na eziokwu ahụ bụ na ọ bụ ike ị bụla n'ụwa akwụkwọ ego. Ọ na-ọrụ offline site na ichekwa ndị emelitere ikpeazụ udu, nke bụ oké ma ọ bụrụ na ị dị ka ebe na-enwechaghị Njikọta ma ọ bụ na-agbalị ịzọpụta on data.
• Free, iOS na Android, xe.com
A bit dị ka a n'akpa uwe njem gị n'ụlọnga, Tripit akwusila ọnụ njem ozi si gị nkwenye ozi ịntanetị maka flights, hotels, mgbazinye ụgbọala, ihe ntinye akwụkwọ na-atọghata ya n'ime otu njegasi. Dị nnọọ na-atụ gị ozi ịntanetị na-eji ngwa ahụ na ọ ga-eme ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eme njem na ndị ọzọ na i nwere ike mfe ịkọrọ atụmatụ, -eme nke a a bara uru ngwa n'ihi na ịhazi otu ìgwè njem.
• Free, iOS na Android, tripit.com
E nwere nhọrọ nke ngwa ọdịnala si n'ebe-enyere gị aka kewaa ego (Tipulator, Splitwise etc), ma Splittr na-haziri maka maka njem, enye a dị mfe usoro ụzọ ịkọrọ akwụ ụgwọ n'etiti enyi. Ị nwere ike tinye mmefu dị ka ị na-aga, gụnyere ndị na-akwụ ihe na ngwa ga-eme ndị ọzọ. A mma aka n'ihi na ogologo, multi-eje njem bụ na ihe nile ego na-akwado na ị nwere ike mix ego na-enweghị na-eme na ntughari onwe gị.
App na Air
Abụghị kpọmkwem nkwafu site aha, ezie na-achọ igwu site n'okike, App na Air bụ a smart, n'ụzọ kwụ ọtọ, ụgbọ elu nsuso ngwa na nwere mma mkpuchi nke ụgbọ elu na ọdụ ụgbọelu. Ọ ga na-ị na-emelite banyere ụgbọ elu ọnọdụ - ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-adịghị internet mkpuchi - na-enyere gị aka jikwaa gị oge na ọdụ, ada ada ọ bụla ụgbọ elu n'ime anọ nkebi; ndebanye mbata, ebi ebi, takeoff na ọdịda oge. Ọ na-integrates na Tripit (n'elu) ekwe ka ị na-mbubata niile gị flights.
• Free, iOS na Android, appintheair.mobi
Nke a sụgharịrị nwere ike ịba ezigbo uru na-akwado gị onwe gị, ndị siri ezigbo asụsụ mmụta, ma n'ezie, ọ bụ kasị bara uru na a bara uru larịị ngwa ngwa asụgharị ụbọchị na-ụbọchị okwu ị na-abịa gafee on your njem. Ọmụmaatụ, i nwere ike ijide gị igwefoto ruo ederede - dị ka ihe ịrịba ama, ma ọ bụ a menu - na Google ga na-asụgharị ya n'ihi na ị n'otu ntabi. Ọ bụ ihe dị oké mkpa ngwa maka ihe ọ bụla njem.
• Free, iOS na Android
• Free, iOS na Android, livetrekker.com
When you’re done browsing Guardian Travel, n'ezie, the Time Out app is a great directory of ideas of things to do in cities around the world. With coverage from Accra to Amsterdam, Edinburgh to Singapore, the app covers everything from bars, restaurants, attractions and events. The event finder is a particularly useful tool, meaning you’ll never struggle to find the most popular concerts, festivals or one-off happenings going on around you. You can also book restaurants and concert tickets through the app and create a customised travel guide for your holiday.
← The 25 kasị atụ anya egwuregwu vidio nke 2016 WD-40 na microwaved tampons: nzuzo nke nri foto kpughere →